» कोच राजु लामाको टिमबाट को पुग्ला अन्तिम ४ मा ?
कोच राजु लामाको टिमबाट को पुग्ला अन्तिम ४ मा ?
१६ पुष २०७८, शुक्रबार २०:५३
मकवानपुर, १६ पुस । द भोईस किड्स नेपालका चर्चित कोच गायक राजु लामाको टिमबाट लाईभमा भिडेका ६ जना प्रतियोगीहरुले तहल्का मच्चाएका छन् । उनीहरु सबैले दमदार प्रस्तुति दिएपछि अब उनीहरुमध्ये कुन ४ प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट १६ मा पुग्लान् भनेर यतिखेर दर्शक श्रोताहरु चर्चा गरिरहेका छन् । यो साता शुक्रबार र शनिबारको एपिसोडबाट कोच राजुको टिममा रहेका ६ जना प्रतियोगीहरुमध्ये २ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिनेछन् । ४ जना प्रतियोगीहरु भने उत्कृष्ट १६ का लागि छानिनेछन् । कोच राजुको टिमबाट पासाङ दिक्की शेर्पा, गंगा कार्की, ईप्सीचुङ चाम्लिङ, प्राप्ती तामाङ, आर्यतारा रिजाल र सुप्रिम मल्ल ठकुरीले लाईभमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यी ६ जना प्रतियोगीहरु आ–आफ्नै गायन शैलीका कारण चर्चामा छन् । दर्शक श्रोताहरुले सबैै प्रतियोगीहरु अघिल्ला राउण्डका लागि योग्य भएको भन्दै कमेन्ट गरिरहेका छन् । तर शोको नियम अनुसारै केबल ४ जनाले मात्र अगाडिको यात्रा तय गर्नेछन् । तपाईको विचारमा यी ६ जना प्रतियोगीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी उत्कृष्ट १६ मा पुग्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
कोच प्रमोदको टिमबाट कोच राजुको टिममा स्टिल भएर आएकी पासाङ दिक्की शेर्पा उत्कृष्ट १६ मा पुग्न सक्ने बलिया प्रतियोगी हुन् । पासाङ द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल आठौँ प्रतियोगी हुन् । १३ वर्षीया पासाङ नयाँपाटी सुन्दरीजलमा बस्छिन् । पासाङ ओखलढुङ्गाकी हुन् । त्यस्तै कोच मिलनको टिमबाट कोच राजुको टिममा स्टिल भएकी गंगा कार्की पनि सम्भावना बोकेकी प्रतियोगी हुन् । १३ वर्षीया गंगा मुगु निवासी हुन् ।
कोच राजुका बलिया खम्बाहरु मध्येका एक ईप्सिचुङ चाम्लिङलाई धेरै दर्शक श्रोताले फाईनलमा पुग्नसक्ने प्रतियोगीका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । ईप्सि द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल तेस्रो प्रतियोगी हुन् । १० वर्षीय ईप्सी खोटाङ निवासी हुन् । त्यस्तै कोच राजुको टिमकी सानी नानी प्राप्ति तामाङ पनि सम्भावना बोकेकी प्रतियोगी हुन् । ८ वर्षीया प्राप्ति काभ्रेको रोशी ९ मंगलटार निवासी हुन् ।
कोच राजुको टिममा वेष्टर्न प्यार्टनका गीतहरु गाएर तहल्का मच्चाएकी आर्यतारा रिजाललाई पनि धेरै दर्शक श्रोताहरुले फाईनलमै पुग्नसक्ने प्रतियोगीका रुपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । उनको गायन शैली अरुको भन्दा फरक छ । १३ वर्षीया आर्या बौद्ध निवासी हुन् । त्यस्तै कोच राजुको टिमबाट विजेता समेत दाबी गरिएका सुप्रिम मल्ल ठकुरी अर्का आसा लाग्दा प्रतियोगी हुन् । सुप्रिम द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल दोस्रो प्रतियोगी हुन् । ९ वर्षीय सुप्रिम बाजुरा निवासी हुन् । उनी द भोईस किड्स नेपालमा आउनुपूर्व नै चर्चित थिए । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–